August 2018 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
संसदीय समितिले आज माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने
8/28/2018 05:01:00 PM मुख्य समाचार
काठमाडौं , भदौ १२ गते । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि आज माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ।
समितिले कार्यदलका सदस्यहरुलाई छलफलका लागि ११ बजे बोलाएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षाका विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति डा केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा केयुका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्वडिनहरू डा मदन उपाध्याय र डा रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा भगवान कोइराला, शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी सदस्य थिए। कार्यदलले करिब ६ महिनामा ३ हजार घन्टा छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्ने माग डा गोविन्द केसीले राखेका छन्। सरकारले डा केसीसँगको उक्त मागमा सहमति गरेको छ।
सोही आधारमा समितिले विधेयकका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको हो। समितिले विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरुसँग छलफल गरिसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ साल पुस १८ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदललाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। उक्त कार्यदललाई सोही वर्षको चैत २० मा चिकित्साशास्त्र लगायतका विषयका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिफारिसका गर्न पनि कार्यक्षेत्र थपिएको थियो। कार्यदलले २०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट
8/28/2018 04:57:00 PM मुख्य समाचार
8/28/2018 04:49:00 PM विचार
8/28/2018 04:41:00 PM समाचार
एशियाड - भलिबलमा नेपालद्वारा मङ्गोलिया पराजित
8/28/2018 04:24:00 PM खेलकुद
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । इण्डोनेशियामा जारी १८ आँै एशियाली खेलकूद अन्तर्गत आज भएको पुरुष भलिबल खेलमा नेपालले विजय हासिल गरेको छ ।
यसअघिको समूह चरणको खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेई र दक्षिण कोरियासँग पराजित भएको थियो । नेपालले खेलको पहिलो सेट २८–२६ ले गुमायो । त्यसपछिको खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै नेपालले लगातार तीन सेट आफ्नो पक्षमा पा¥यो । नेपालले दोस्रो सेट २५–१६ ले जित्यो भने तेस्रो सेट ३०–२८ तथा चौथो सेटमा २५–१९ ले आफनो पक्षमा पार्दै प्रतियोगितामा सहज जित हात पा¥यो ।
नेपालले १३ औँ देखि १८औँ वरियताको लागि खेलेको हो । यो वरियताका लागि नेपालसँगै मङ्गोलिया, काजकस्तान र किर्गिस्तान रहेका छन् । नेपालले अब श्रीलङ्का र भियतनाममध्ये एक टोलीसँग खेल्नेछ । रासस
8/28/2018 04:21:00 PM खेलकुद
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । एशिया कप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गतको उद्घाटन खेलमा नेपालले ओमनको सामना गर्ने भएको छ ।
सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता
8/28/2018 04:18:00 PM समाचार
तुलसीपुर, भदौ १२ गते । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएसँगै जिल्ला अदालतमा नयाँ प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुन थालेका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान सक्ने व्यवस्था भएपनि पुरुष भने अदालत गएर मुद्दा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था थिएन । यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि सोझै अदालत जाने बाटो खुला गरेको छ ।
अहिले जिल्ला अदालत घोराहीमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पुरुष पुग्न थालेका छन् । जिल्ला अदालत घोराहीका अनुसार भदौ १ गतेदेखि सोमबारसम्म अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि १५ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गम्भीर राणाले जानकारी दिनुभयो । एघार सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका हुन् । श्रीमतीले घर व्यवहार चलाउन नसकेको, आफू वैदेशिक रोजगारीमा बस्दा पठाएको पैसा हिनामिना गरेको, विदेशबाट घर आउँदा श्रीमती घरमा नभएको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको लगायतका कारण देखाउँदै पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । सम्बन्ध बिच्छेद गारउनेमा ७३ वर्षका वृद्धसमेत रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा ६६४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले ४९७ मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने १६६ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । नयाँ संहिता लागू भएसँगै अदालतमा नयाँ प्रकृतिका मुद्दा आउन थालेको राणाले बताउनुभयो । अब अदालतले सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा पक्ष र विपक्षलाई मेलमिलापकर्ताका माध्यमबाट सकेसम्म मिलाउने कोशिश गर्ने र मिल्नै नसक्ने अवस्था भए सम्बन्ध बिच्छेद गरिने राणाको भनाइ छ । यसअघि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जाने व्यवस्था थियो । पुरुषले गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकालगायतका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत जान पाउने कानूनी व्यवस्था थियो ।
नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तको नेतृत्वको टोलीले सोमबार अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यकक्षमा नभेटिएका, अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन सही रूपमा हुन नसकेको तथा जथावाभी पार्किङ गरिएको पाइएको पन्तले बताउनुभयो । उपक्षेत्रीय अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा जनार्दन पन्थीले सेवामा सुधार गर्न पहल गरिने बताउनुभयो । उक्त अस्पतालमा १२१ जनाको दरबन्दी रहेकमा हाल ७९ जना मात्र कार्यरत छन् । रासस
8/28/2018 04:12:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
8/27/2018 05:10:00 PM विचार
गलपासो बन्दै संघीयता
8/27/2018 05:05:00 PM विचार
गाउँगाउँमा सिंहदरबार संघीयताको अवधारणा हो। प्रदेश संरचनाले संघीयताको अभ्यासलाई सार्थक रूप दिएको हो। तर अभ्यासकै क्रममा गलत परम्पराको सुरुआत गरिएको छ। संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश–प्रदेशको संसद्मा गएर उपदेश दिन थालेपछि त्यसको मर्ममा ठाडो प्रहार भएको छ। अभ्यासकै क्रममा प्रदेश स्वतन्त्रतामाथि खेल्न थाल्दा त्यसले संघीयताको भविष्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले संघीयता असफल बनाएर आफू सफल हुने प्रधानमन्त्रीको मनसाय स्पष्टै देखिन्छ। यो सिंहदरबारको ‘सिंह’ बाहिर निस्कन इच्छुक छैन भन्ने संकेत हो। सिंह बाहिर निस्कियो भने दरबार नारायणहिटीजस्तै हुनेछ भन्ने बोध प्रधानमन्त्रीलाई भएको प्रतीत हुन्छ।
नारायणहिटीको सामन्ती सिंहलाई बाहिर निकालेर हिन्दु संस्कारको टीका लगाउन वञ्चित गर्ने हो भने देश बन्छ भन्ने दर्शन क्रमशः असफल बन्दैछ। बाहिरिया दर्शन बोकेर हिँड्दा नेपाली धरतीलाई खुसी बनाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने बोध नेतृत्व वर्गमा भएको आभास हुन्छ। यति छिटै प्रकट गर्दा लज्जाबोध हुने डर मात्र हो। दुईतिहाइको बलियो सरकार, दलीय संस्कार र क्रियाकलापले यही संकेत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भनि नै सके संघीयता महँगो हुन्छ भनेर। मैले त्यतिबेलै भनेको हुँ। त्यसैले त शक्तिरूपी ‘सिंह’ गाउँ जान इच्छुक छैन।
सिंहदरबारको ‘द्रव्यरूपी सिंह’ भने गाउँगाउँमा पसिसकेको धेरै भयो। संक्रमणको नाममा त्यो तीन दलीय सिंहले राज्यको ढुकुटीमै पहिल्यै प्वाल पारिसकेको हो। त्यो सिंहले दलको नामधारी एकतिहाइलाई धनी बनायो भने दुईतिहाइ गरिबको ढाड भाँच्यो। यो ‘द्रव्यरूपी सिंह’ को यही प्रकृतिको दादागिरी चलिरहने हो भने संघीय शासन व्यवस्थाको दाहसंस्कार गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्नेहरू नै त्यसको मर्ममा प्रहार गरिरहेका छन्। विकासको नाममा विनाशको संस्कृति त गणतन्त्रको नयाँ उपहारमात्र हो।
त्यसो त लक्षित वर्गको सम्बोधन हुन नसक्दा संघीयता अभिशाप बन्न थालेको छ। जनताका अधिकार र अपेक्षा बलात्कृत भएका छन्। संघीयताले जनतालाई घरदैलोमै सेवासुविधा पुर्‍याउँछ भन्ने प्रचार थियो। पत्याइयो पनि। तर जनतालाई फापे दलका नेताकार्यकर्ताका लागि भने फलिफाप भयो। यो कसैको विरोध वा समर्थनले नभई नेतृत्वको कार्यशैली बेढंगी भएरै हो। देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा नेता ठूलो र नेताभन्दा पनि सत्ता ठूलो जनताभन्दा आफन्त ठूलो भइदिएपछि व्यवस्था कसरी फाप्छ ?
"सामर्थ्य बुझेर नयाँ व्यवस्था अंगीकार गर्न नसक्दा संघीयता सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ। "
स्थानीय तहका प्रतिनिधिको बढ्दो द्रव्यमोह थप कारक बन्यो। स्थानीय निकाय छँदा पनि अनियमितता भएकै हो, तर थोरै भए पनि समाज सेवाको भावना थियो। जंगली हात्ती सहर पसेपछि झन् मिलिजुली खाने संस्कार विकास गरियो। व्यवस्था बदलियो तर संस्कार र संस्कृति बदलिएन। अनि संघीयताको अवधारणाले मूर्तरूप पाउने कुरै भएन। यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्छ– नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सहमति तत्कालका लागि अमृतसिद्ध भए पनि दीर्घकालका लागि अभिस्शाप बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यो व्यवस्था नराम्रो भएर नभई व्यवस्थाका सञ्चालक पात्रको नैतिक संस्कार र राजनीतिप्रतिको ज्ञानको अभावमा हो।
पछिल्लो समय त संविधान कार्यान्वयनका प्रकृति हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व मानसिक रूपमा संघीयताका लागि तयार नभएको स्पष्टै देखिन्छ। केन्द्रीय प्रशासनसमेत संघीयताप्रति उदार छैन। निर्दलीय व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरण असफल बनाउन सघाउनेहरूकै घेरामै संघीय सरकार परेको आरोप प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले त्यसै लगाएका होइनन्। त्यसो त उनीहरू पनि सेवासुविधाकै लागि केन्द्रीय नेतृत्वप्रति अधिकार नदिएको नाममा अनुदार बन्दै गएको लुकाएर लुक्दैन। जनताले तिरेको सबै कर सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्चमै खेर गइरहेको छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासन जनताको सेवा गर्न चुकेको छ। न कमाइका बाटा सहज छन् न त सेवासुविधा, अनि करको भारी मात्र बोकाइएको छ। जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। यसमा राज्य चुकेको छ। विदेशीसँग ऋण मागेर संघीयता चल्दैन। सामर्थ्य बुझेर नयाँ व्यवस्था अंगीकार गर्न नसक्दा संघीयता सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ।
मधेसबाट पहाडतिर लाग्दै गरेको एउटा सरकारी दल संघीयता मधेस आन्दोलनको उपज ठान्छ। संघीयतापछि तराईमधेसका जनताले के पाए त ? केही सम्भ्रान्त मधेसीको संघीय र प्रदेशको सत्तामा हालिमुहालीका लागि मात्र थियो त मधेस आन्दोलन ? कहाँ कसको दादागिरी कायम रहने भन्ने द्वन्द्वले न तराईमधेस बन्छ न त हिमाल र पहाड। त्यसैले संघीयता तराईमधेसका लागि पनि देखाउने दाँत मात्र भएको छ। संघीयतामाथि साँच्चिकै खतरा छ भने षड्यन्त्र देख्नेहरूबाटै छ। क्षमता नभएपछि व्यवस्था र पात्र बदलिएर मात्र देशको उन्नति हुँदैन, व्यक्तिभित्रको संस्कार, संस्कृति र आचरणमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। पात्र बदल्नकै लागि मात्र व्यवस्था परिवर्तन गरिएको होइन।
देशमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न तीनवटा सरकारबीच समन्वय जरुरी हुन्छ। हाम्रोमा अभ्यासको सुरुवातमै खटपट सुरु भइसक्यो। स्थानीय सरकारमा प्रदेशको दादागिरी, प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारको दादागिरी र संघीय सरकारमा केही ठालू नेताको दादागिरी कायम रहने हो भने नागरिकको सार्वभौम अधिकार पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। हामीले संघीयता चलाउन नसक्ने भयौं भने पनि लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको सुरक्षामा भने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। किनकि संघीयताप्रति कसैको पनि उदार भाव देखिन्न।
हो, कडा मेहनत र धेरैको ज्यान फालेर ल्याएको व्यवस्था कसरी त्याग्ने भन्ने लज्जाबोध होला, तर देशका लागि बलिदानी दिने सपूतको सपना साकार यो व्यवस्थाबाट हुने छाँटकाँट छैन। यति महँगो व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सामना गर्न हामी सक्षम हौंला त ? नागरिक कर तिर्ने क्षमतामा छैनन्, आयात र निर्यातबीचको खाडलले देश खोक्रो भइसकेको छ, विदेशीले ऋण दिएनन् भने जनप्रतिनिधिलाई पाल्ने हाम्रो हैसियत छैन भने कुन मानेमा यो व्यवस्थाले देशको रक्षा गर्ला ? मागेर चलाउने व्यवस्था कतिन्जेल धानिएला ? अनि दिनेले हाम्रो अनुकूल चल्न देला ? हो आयातीत व्यवस्थाले हाम्रो हित हुँदैन त्यसै भनिएको होइन। यहाँनेर चित्रबहादुर केसीलाई स्मरण गर्नैपर्छ। विभाजित होइन सिंगो नेपालमा मात्र सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने बेलैमा मनन गरौं। - बिनोद न्योपाने , अन्नपुर्ण पोस्टबाट
'२०३० सम्ममा समृद्धिको संकेत पाइने’
8/27/2018 04:47:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरुसंँग भन्नुभयो “देखेको कुरा लेख्नुहोस्, लागेको कुरा लेख्नुहोस् तर जनतालाई निराशा नछाओस् भन्ने कुरामा सचेत भइदिनुहोस् । ” - रासस
8/27/2018 01:03:00 PM भिडियो
New Teej Song 2075/2018 | ChamkiyaTaruni - Khuman Adhikari & Silu Bhattarai Ft.James BC & Loshia LC
8/27/2018 12:56:00 PM भिडियो
8/27/2018 12:33:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
यसअघि संसद्बाट सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । विनियोजन विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (बाइसौँ संशोधन) विधेयक २०७५ गत असार मै पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेको छ । - रासस
8/27/2018 12:26:00 PM स्वास्थ्य
8/27/2018 12:12:00 PM स्वास्थ्य
महिला र पुरुषमा सन्तान नहुने कारण र उपचार
8/27/2018 12:07:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
बाँझोपन हुन नदिन ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू
काठमाडौं , भदौ ११ गते । ३० वर्षीया नवीना श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) एक राम्रो कम्पनीमा जागिरे छिन्। उच्च घरानाकी उनको बिहे भएको पाँच वर्ष पुग्यो तर बच्चा हुन सकेको छैन। उनले दिनरात आफ्नो श्रीमानहेक घरका सबै सदस्यको हेपाइ सहँदै आएकी छिन्।
आफ्नै देउरानीका दुई वटा बच्चा जन्मिसक्दा आफ्नो एउटै सन्तान नहुुनुको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि परिवारको व्यवहारले उनको मन भतभती पोल्छ। सासू त उनको मुख हेर्न पनि रुचाउँदिनन्। नवीना सुनाउँछिन्, ‘पेट बोकेका अरू महिलालाई हेरिस् भने पनि तैंले बाँझी नै बनाइदिन्छेस् होला भनेर अनेक टोकसो दिनदिनै सुन्नुपर्छ मैले।’
उनकी सासूले बेलाबेला छोरालाई अर्को विवाह गर्न दबाबसमेत दिँदै आएकी छिन्।
३५ वर्षीय सुयश शर्मा (नाम परिवर्तन) पेसाले डाक्टर हुन्। उनकी श्रीमती पनि मेडिकल क्षेत्रमै कार्यरत छिन्। ती दम्पतीलाई बिहेको दुई वर्षपछि बच्चा जन्माउने रहर पलायो।
तर बच्चा हुन सकेन। जसले गर्दा सुयश एकदम गहिरो चिन्तामा परे। झन्डै डिपे्रसनमा पुगेका उनीले इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभिएफ) अर्थात् टेस्टट्युब बेबी प्रविधि अपनाउने विचार गरे। दुर्भाग्यवश त्यो प्रयास असफल हुन पुग्यो तर केही समयपछाडि श्रीमती गर्भवती हुन पुगिन्। पेटमा बच्चा बसेको रहेछ।
अहिले उनीहरूको छोरा छ। दुवै जना निकै खुसी छन्।
एक व्यापारी दम्पत्तीको समस्या अलि फरक छ। सुरुमा उनीहरूले बच्चा जन्माउन चाहेनन्। त्यसकारण धेरैचोटी गर्भपतन गरे।
पटक–पटकको गर्भपतनका कारण महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गयो। पछि बच्चा जन्माउन चाहे। तर, भएन। उपचारका लागि धेरै ठाउँ धाउँदा पनि समस्या सुल्झिएन। पछि संक्रमण बढ्दै जाँदा पाठेघर नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आयो।
केही सिप नलागेपछि अन्ततः उनीहरूले बच्चा अपनाउने (धर्म सन्तान लिने) निर्णय गरे। बच्चा ६ महिना पुगेपछि राम्रै होटलमा भव्य पार्टी दिए।
अहिले ती दम्पती निकै खुसी छन्।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा भेटिइन्, २८ वर्षीया सरु लामा।
बिहे भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बच्चा नभएपछि उनी प्रसूति गृहको निःसन्तान केन्द्रमा उपचारका लागि आएकी रहिछन्। एक महिनादेखि धाउँदै गरेकी उनलाई चिकित्सकले श्रीमान्मा कमजोरी रहेको बताएका छन्। अहिले उनी उपचारका लागि इन्ट्रा युटेरियन इन्सिमिनेसन (आइयुआई) प्रविधि प्रयोग गर्दैछिन्।
महिलाको पाठेघर सबै ठिक छ, तर पुरुषको शुक्रकिटमा समस्या छ भने त्यस्तो समस्यामा आइयुआई विधि अपनाइन्छ। यो विधि भनेको पाठेघरमा सोझै पुरुषको शुक्रकिट राख्ने विधि हो।
तर यो विधिको सफलता दर भने कम छ। यो विधिबाट पनि बच्चा नभएकालाई मात्र आइभिएफ विधिमा लगिन्छ। आइयुआई उपचार उनी दोस्रोपटक गर्दैछिन्। पहिलो प्रयास असफल भएपछि निराश नभएकी होइनन् तर हिम्मत भने हारेकी छैनन्।
भन्छिन्, ‘हेरौं के हुन्छ ?’
बालबच्चासहितको सुन्दर र सुखी परिवार। विवाहित महिला वा पुरुषको इच्छा यही हुने गर्छ। विवाहित जोकोहीलाई पनि सन्तानको चाहना कसलाई हुँदैन र ?
तर इच्छाएका सबै कुरा पूरा हुँदैनन्। सन्तान नहुँदाको पीडा निःसन्तान दम्पतीबाहेक अरू कसले महसुस गर्न सक्ला र ? सामाजिक मूल्य मान्यता र कूलसँग जोडिएको सन्तान प्राप्तिको इच्छा जोकोहीलाई पनि हुन्छ।
तर सन्तान नहुँदा विशेषतगरी पुरुषलाई भन्दा पनि महिलालाई बढी दोषी देख्ने गरेको छ, हाम्रो समाजले। बाँझी भनेर हेप्ने होच्याउने चलन छ। बच्चा भएन भनेर श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्ने, श्रीमतीलाई घरनिकाला गर्ने र कतिपय अवस्थामा आत्महत्या गरेका समेत अवस्था देखिन्छ।
सामाजिक मात्र होइन मानसिक समस्या पनि बन्दै गइरहेको छ बाँझोपन। नेपाली समाजमा विभिन्न कारणले गर्दा बाँझोपनको समस्या फैलिइरहको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा करिब १५ प्रतिशत विवाहित दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ। यी समस्या भएकामध्ये आधाभन्दा बढी सामान्य परामर्श तथा चेतनाबाट समाधान गर्न सकिन्छ। बाँकी समस्या औषधि र उपचारबाट समाधान गर्न सकिन्छ भने थोरैलाई मात्र टेस्टट्युब बेबी तथा कृत्रिम गर्भाधान गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
सामान्यतया महिला र पुरुषबीच यौनक्रिया भएपछि पुरुषको लिंगबाट निस्किएको वीर्य महिलाको योनीद्वार हुँदै डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्दछ। यसरी पुरुषको वीर्यबाट शुक्रकीट महिलाको डिम्बबाहिनी नलीमा प्रवेश गरेर डिम्बसँग मिसिन्छ।
डिम्ब र शुक्रकीटको मिलनबाट भ्रुण तयार हुन्छ र पाठेघरमा पुगेर विकसित हुन्छ। महिना दिनपछि यस भ्रुणले शिशुको रूप धारण गर्छ। तर, कहिलेकाहीँ दम्पतीले चाहँदा–चाहँदै पनि गर्भ नरहने हुन्छ।
कुनै पनि दम्पतीले विवाह गरेको एक वर्षसम्म परिवार नियोजनका कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी सम्पर्क गर्दा गर्भ बसेन भने त्यसलाई बाँझोपन भनिन्छ। प्रसूति गृह निःसन्तान उपचार केन्द्रकी प्रमुख एवं वरिष्ठ महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा उषा श्रेष्ठ खाँडका अनुसार बाँझोपनको समस्याका विभिन्न कारण हुन सक्छन्।
‘धेरैजसोलाई गर्भ कतिबेला बस्छ भनेर उपयुक्त समयको ज्ञान नभएको हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपयलाई परामर्श दिएर पनि निको पारेका छौं।’
काठमाडौं मोडेल हस्पिटलका डा गणेश दंगालका अनुसार बाँझोपनका प्रकार महिला र पुरुषमा फरकफरक हुन्छन्। महिलामा मानसिक तनावका कारण आन्तरिक हार्मोनमा गडबडी आउनुका साथै अण्डबाहिनी नली बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ भने डिम्बाशयमा पनि गडबडी देखा पर्न सक्छ।
त्यसैगरी पाठेघरको झिल्ली पातलिनु तथा मासु बढ्नु, गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुनाले पनि बाँझोपनको समस्या महिलामा हुन्छ। त्यसैगरी पुरुषमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा धूमपान तथा मद्यपान सेवन, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय शुक्रकीट नहुनु, शुक्राणुको संख्या कम हुनु आदि समस्या पाइने गरेको छ।
दुवैको उत्तिकै दोष
हाम्रो समाजमा विशेषतः बच्चा नजन्मिएको सवालमा महिलालाई दोष दिने चलन छ। तर यसमा दुवै जनाको उत्तिकै कमजोरी रहेको बताउँछिन् डा उषा श्रेष्ठ खाँड। ‘पितृसत्तात्मक समाज भएर पनि होला दोष जति सबै महिलालाई नै जाने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अझ कतिपय त श्रीमतीको दोष देखाउँदै दोस्रो विवाह पनि गर्न पुग्छन्।’
डा भोला रिजाल पनि सन्तान हुन नसक्नुमा महिला तथा पुरुष दुवै समान रूपमा जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सन्तान नहुनुमा पुरुषको ३३, महिलाको ३३ र दुवैको साझा ३३ प्रतिशत दोष रहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुवैमा खराबी नहुँदानहुँदै पनि गर्भ रहन कैयौं वर्ष लाग्न सक्ने अवस्था पनि आउने उनी बताउँछन्।
सन्तान नहुने कारणहरू
ओम अस्पतालकी निःसन्तान विशेषज्ञ डा सविना श्रेष्ठ प्रधानका अनुसार पुरुष र महिलामा सन्तान नहुने कारण फरकफरक हुन्छन्।
‘पुरुषमा सन्तान नहुने कारणमा वीर्यमा शुक्राणुको संख्या वा गतिमा कमी, शुक्रकीट उत्पादन नहुनु, वीर्यमा संक्रमण, शुक्राणुको बनावटमा खराबी, हर्मोनमा गडबडी, पुरुष कुनै कारणवश सहवास प्रक्रियामा असमर्थ हुनु, शुक्रनली वा अन्य भागमा अवरोध लगायत पर्छन्,’ उनले जानकारी दिइन्, ‘यस्तै, महिलामा भने अण्डाशयमा अण्डा नबन्ने अथवा थुप्रै सानासाना डिम्ब बने पनि नबढ्ने, पाठेघरको नली पूरा बन्द हुने, पिप या पानी जम्ने या अण्डा पक्रिने काम नगर्ने, पाठेघरको झिल्ली क्षयरोग अथवा कुनै कारणबाट पातलो हुने, हार्मोनमा गडबडी, पाठेघरको झिल्लीमा मासु बढ्ने, गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुने, धेरैभन्दा धेरै गर्भपतन गर्ने कारणले पनि गर्भ बस्दैन।’
असुरक्षित गर्भपतनको खतरा
पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको असुरक्षित गर्भपतनका कारण पनि महिलाहरूलाई निःसन्तान बनाइरहेको छ। विवाहपूर्व नै यौनसम्पर्क राख्ने युवतीहरूले लुकिछिपी असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदा पाठेघरको नली बन्द हुने, पाठेघरमा घाउ भएर असर गर्ने जस्ता समस्याले निःसन्तानको खतरा बढाइरहेको डा श्रेष्ठ बताउँछन्। यसका साथै बजारमा जथाभावी पाइने औषधिको सेवनका कारण झन् अहिले युवतीहरूमा बाँझोपनको समस्या निम्तिइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार र यौनरोग पनि कारण
चिकित्सकहरूका अनुसार युवा उमेरमै रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरूले विदेशबाट यौनरोगहरू भित्र्याइरहेका छन्। यस्ता युवाहरूमा पनि यौनरोगको संक्रमणका कारण सन्तान नहुने समस्या आइरहेको छ। डा श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेका कारण धेरै युवाले स्वदेशमा आएर विवाह गर्दा सन्तान पाउने अवसर गुमाइरहेका छन्। यसका साथै रसायनयुक्त कम्पनी, उच्च तापक्रममा काम गर्ने मानिसमा शुक्रकीट मर्ने र कम हुने समस्या आउँछ। यसका कारण पनि बच्चा नहुने समस्या थपिइरहेको छ।
– महिनावारी भएको दास्रो वा तेस्रो दिनमा हार्मोनको जाँच
– भित्री अल्ट्रासाउन्डद्वारा अण्डाको जाँच
– वीर्यको विशेष जाँच
– आवश्यकता अनुसार टेस्टिकुलर बायोप्सी गर्ने
– हार्मोनको जाँच
बाँझोपन हुन नदिन ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू :
जंक फुडको प्रयोग धेरै नगर्ने।
सही समयमा विवाह गर्ने। नेपालको सन्दर्भमा २५ देखि ३० वर्षको उमेर समूहलाई उपयुक्त मानिन्छ।
स्वस्थ जीवनशैली जिउने,
तनावयुक्त जीवन नबाँच्ने,
यौनरोग लाग्न नदिने,
मद्यपान तथा धूमपानबाट टाढा रहने।
आइयुआई (अल्ट्रा युटेरिन इन्सिमिनेसन)
यो विधि पुरुषमा स्वस्थ शुक्रणुको कमीको कारण प्रयोग हुने विधि हो, जसमा स्वस्थ शुक्राणुको पहिचान गरी स्त्रीको पाठेघरमा ‘क्याथेटर’को माध्यमबाट राखिन्छ। यो विधि स्त्रीको डिम्बको निर्माण समुचित रूपले हुन नसकेपछि प्रयोग गरिन्छ। यो विधि उपचारको सुरुवाती विधा हो। यसमा डिम्बको समुचित आकारको लागि केही औषधिको पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा सफलताको दर २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ।
आइभिएफ (इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन)
आइयुआई असफल भएपछि यो प्रयोग गरिन्छ। यो २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म सफल हुने सम्भावना हुन्छ। यो विधिमा स्त्रीको डिम्ब र पुरुषको शुक्राणुलाई गर्भाधारणको प्रारम्भिक प्रयोगशालामा गरिन्छ। यो विधिलाई टेस्टट्युब बेबी पनि भनिन्छ।
इन्ट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इन्जेक्सन (आइसिआएसी) यो विधि आइभिएफ जस्तै विधि हो जसमा एक शुक्राणु र एक डिम्बको निशेचन गरिन्छ र यसमा सफलताको दर २० देखि ३० प्रतिशत हुन्छ। यो विधि अरूभन्दा महँगो छ।
बाँझोपनले बुनेको मनोसामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न सुरुमा मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ। प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जनचेतना हुुनुपर्‍यो। विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार धेरै गर्भपतन, गर्भनिरोधक चक्कीको जथाभावी प्रयोग, बढ्दो प्रदूषणले यसको समस्या बढाएको छ।
अहिले विभिन्न आधुनिक प्रविधिको विकास भइसकेको छ। समस्या आउनुभन्दा पहिला नै यसमा सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। - बुनु चौधरी , स्वास्थ्य दैनिक खबरबाट
8/27/2018 11:58:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रविरुद्ध उजुरी आह्वान
8/27/2018 11:41:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आइतबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्को पत्राचार अनुसार मिश्रको सुनुवाइका लागि सर्वसाधरण तथा सरोकारवालासँग उजुरी माग गरेको हो ।
भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म दश दिनको समयसीमाभित्र उजुरी दर्ता गरिसक्न समितिले आह्वान गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका सह–सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रका सम्बन्धमा उजुरी भएमा दिनसक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
घिमिरेले भन्नुभयो ‘भोलिबाट दश दिनको समय दिएर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । उजुरीपछि सुनुवाइको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ मिश्रका सम्बन्धमा कुनै उजुरी भएमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधरण समेतले उजुरी दिन पाउनेछन् ।
समितिको इमेलमा पनि उजुरी पठाउन सकिनेछ । यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयमा पनि उजुरी दर्ता हुनेछ । जिल्लाबाट उजुरी पठाउनका लागि जिल्ला प्रशासन काउर्यालयमार्फत दर्ता गर्न सकिनेछ ।
यसअघि संवैधानिक परिषदको भदौ ७ गतेको बैठकले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । यसअघि सिफारिसमा पर्नुभएका दीपकराज जोशीलाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषदले पुनः मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो । उजुरी आह्वानको समयसीमा सकिएपछि समितिले उजुरी परेको अवस्थामा उजुरकर्तासँग छलफल गर्नेछ । उजुरकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि बोलाउनेछ । समितिले सुनुवाइपछि अनुमोदन हुने वा नहुने निर्णय गर्नेछ । प्रस्तावित पदाधिकारीलाई समितिको दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्छ ।
8/16/2018 12:00:00 PM धर्म
महलाई सर्प वा नागको सत्रुका रुपमा लिइन्छ, महको थोपाले नै सर्प वा नाग टुक्राटुक्रा हुने भएकोले नागपूजाका दिन मह प्रयोग नगर्नु भन्ने मान्यता पनि छ । - गोरखापत्र दैनिकबाट
8/16/2018 11:58:00 AM धर्म
8/16/2018 11:52:00 AM समाचार
8/16/2018 11:49:00 AM समाचार
रत्ननगर, साउन ३१ गते । रत्ननगर नगरपालिका र आन्दोलनरत सात दलबीच कर समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । गए राति सम्पन्न वार्तामा नगर उपप्रमुख विमला दवाडीको नेतृत्वमा विज्ञसहितको समिति गठन गरी बढेको कर समायोजन गर्ने सहमति भएको वार्ता टोलीका सदस्य लालबहादुर भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर समायोजन भएपछि अहिले बढी तिरेको करसमेत समायोजन हुनेछ । गए राति वार्तामा विभिन्न ११ बुँदे सहमति भएसँगै यहाँका सात राजनीतिक दलले गर्दै आएको आन्दोलन र रिले अनशनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को करलाई आधार बनाएर करको दर समायोजन हुनेछ । “अहिले बढेको कर सोहीअनुसार नै लिने र पछि समितिले जुन दर कायम गर्छ त्यही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने र सेवाग्राहीबाट धेरै कर लिइएको देखिएमा पनि समायोजन या फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ,” वडा नं ७ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका वार्ता टोली सदस्य भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
सहमतिपत्रमा नगरपालिकामा विलासिताका सामान नकिन्ने, पुराना सामानलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने, नगरवासीमा भेदभाव नगर्ने, कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै कर्मचारी राख्ने, रू ३० लाखसम्मका योजना उपभोक्ताबाट गराइने र अरु ठूला योजना टेन्डरमार्फत् गर्ने, नगरस्तरीय दललाई उपेक्षा नगर्नेजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । अस्वाभाविक रूपमा कर बढाइएको भन्दै नेपाली काँग्रेसलगायत विभिन्न सात राजनीतिक दलले चार दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । - रासस
8/15/2018 03:20:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ । - रासस
8/15/2018 03:18:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सदनमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले निवृत्तिभरण पाँच वर्षसम्म मात्र बढाउनुपर्ने, उमेर बढेसँगै दुःख पाउने भएकाले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, निवृत्तिभरणसँगै वृद्ध र बिधवा भत्ता दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका धेरै माध्यममध्ये निवृत्तिभरण कोष पनि एक भएको र कर्मचारी निवृत्त भएपछि मात्र दिइने भएकाले सबैलाई नसमेट्ने बताउनुभयो । - रासस
8/15/2018 12:49:00 PM समाचार
New Teej Song 2075/2018 | Ghar Becha Ya Car - Manohar Bhandari & Alina Shakya Ghimire Ft. Deepak
8/15/2018 12:42:00 PM भिडियो
Teej Ko Rahara Lai Barilai - New Nepali Teej Song 2075/2018 - Manju Thapa, Prashna Shakya
8/15/2018 12:36:00 PM भिडियो
8/15/2018 12:03:00 PM राजनीति
बुटवल, साउन ३० गते । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणकोे अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं ५ मा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको प्रगतिका सम्बन्धमा आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिनुभयो । उहाँले ती आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रदेश नं ५ का सबै मन्त्री र सचिवसमेतको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आयोजनाका प्रमुखसँग आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, खर्च, बाँकी काम र परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय तथा रकमका सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो । प्रदेश नं ५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रुपन्देहीमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि विगत चार दशकदेखि सञ्चालित लुम्बिनी गुरुयोजना, बर्दिया र बाँकेका जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन स्वदेशको पानी स्वदेशमै प्रयोग गर्ने मुख्य आयोजनाको रूपमा रहेको बवई सिँचाइ आयोजना, बाँके र बर्दियाका जमीनमा सिँचाइ तथा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी बवई डाइभर्सन आयोजना तथा तराईका जिल्लालाई सडक यातायातको सञ्जालसँग जोड्न सञ्चालित हुलाकी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना सञ्चालित छन् ।
मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख ओम शर्माले विमानस्थलको निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले १० महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अन्तर निकाय समन्वयको अभावले काम गर्न समस्या भएको शर्माको भनाइ थियो ।
आयोजना प्रमुख शर्माले मुआब्जाको करीब रु ६ अर्ब समयमै निकासा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनको पद्धतिका बारेमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
लुम्विनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले चार दशकदेखि निर्माणको क्रममा रहेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत आवमा गुरुयोजनाको ९९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । गत आवमा सरकारले लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि रु ७१ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको थियो । उहाँले लुम्बिनीको विकासमा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नु, लुम्बिनी क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण हुनु तथा लुम्बिनीलाई जोड्ने सडकको अवस्था कमजोर र वातावरणमैत्री नहुनु समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बवई सिँचाई आयोजनाका प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रवीण श्रेष्ठ, भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख ओमप्रकाश पुडासैनीलगायतले आयोजनाका अहिलेसम्मको प्रगति र काम गर्दाका समस्या सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आयोजनाको समग्र जानकारी लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धिको रूपमा प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य आधार बनाएकाले भेरी बबइ डाइभर्सन, बबइ सिँचाइ आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण ठूला आयोजना बाँके, बर्दियाका उर्वर कृषिभूमिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर प्रदेशलाई कृषिहबको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक तराईका जनताको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसको निर्माणमा राज्यको विशेष चासो रहको बताउनुभयो ।
यस्तै लुम्बिनीमा पर्यटनमैत्री वातावरण नबनेसम्म पूर्वाधार विकासले मात्र आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । विकास कोषले स्थानीयलाई आर्थिक विकासको माध्यममा जोड्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सञ्चालित महत्वपूर्ण आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको बताउँदै प्रदेशमा सञ्चालित सबै आयोजनाको प्रतिवेदन सङ्घीय सरकारलाई पठाउने र समस्या भए समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । - रासस
8/15/2018 11:59:00 AM समाचार
8/14/2018 05:57:00 PM मुख्य समाचार , समाचार